Warbixin Xasaasi ah Dudmadii Prof Axmed ismaaciil Samatar kaga yimid Hargaysa iyo Tabid la’aanta Muuse Biixi ma wax sii qorshaysan oo laga shaqeeyey bay ahayd Mise? | Camuud News Media Network
Home » CAMUUDMEDIA LIVE NEWS » Warbixin Xasaasi ah Dudmadii Prof Axmed ismaaciil Samatar kaga yimid Hargaysa iyo Tabid la’aanta Muuse Biixi ma wax sii qorshaysan oo laga shaqeeyey bay ahayd Mise?
Warbixin Xasaasi ah Dudmadii Prof Axmed ismaaciil Samatar kaga yimid Hargaysa iyo Tabid la’aanta Muuse Biixi ma wax sii qorshaysan oo laga shaqeeyey bay ahayd Mise?
Pro Axmed ismaaciil samatar waxaa u ahaa mishiinka dhaqaajinaayey dulaankii cuslaa ee MUUSE BIIXI ugu jiray hanashada kursiga ugu sareeya dalka, prof Samatar waxaa u socdaal ku kala bixiyey dhamaan gobolada somaliland isagoo shacabka u soo bandhigaayey badheedhah iyo buuga xisbiga isla markaan ku dooran lahaayeen KULMIYE iyo Muuse Biixi
Prof Axmed samatar waxaa kambaynkaasi ukula baxay magacaan dhawr ah , sida .. “shanbaan ku doortay muuse” magacaantaasi oo dhamaantood ahaa hadalo laga soo dheeganaayey muxaadarooyinkii u jeediyey dhalinyarada iyo shacabka reer somaliland , isagoo sheegaayey sobobaha Muuse kaga fiicanyahay kuwa la dhiga ah ee la tartamaayey.
Shacabka aadka u jeclaa horusocka iyo Guusha Muuse ayaa ku hadaaqi jiray prof samatar waxaa loo cumaamaday/Cumaamadayaa wasiirka khaarijiga ee dalka , halka dad badan kale ka biyo diidayeen qaabka samatar wax u wado ee u kabo qaadka ugu noqdan Askarigan ka miisanka fudud isaga, isla markaan doododa ku joojinaayey in reerka galbeedka somaliland dagaa aanay madaxweyne ku xigeen , wasiirkii kharijiga iyo gudoomiye ku xigeenka barlamaanka wada heli karin .
Mahmaah somaliyeed ayaa tidhaa , “xabaal iyo ninkeed loo kala tag” Markii muuse lagu hubsaday kursigii prof samatar ayaa waayey meel u maro ninkii u kursiga la rabay ee Muuse Biixi , waxaan is teeday oo gabi ahaanba isku xeeray Beeshi Sacad muuse oo iyado damaashaadkii iyo dabaal dagyadii aan ka nasan wali , iska daa inuu muuse Mansab u magacaabo prof samatar waxaa suurtoobi wayday inay kulamaan.
prof Samatar waxaa af kala qaad ku noqotay xushmayn la aanta iyo qadarin la’aanta meel gaaban uga soo muuqday , waxaana isku qaban wayday wax u arkaayo iyo waxa u sii sawirtay oo ahaa , nin la la talin karo oo loo sheegi karo wax danta iyo dalka u dana ah.
Axmed ismaaciil samtar waa nin wayn oo wax badan garan kara , markiiba waxaa u yidi ,,WAAR SOWTAN MIDIDAYDIID UUS KU JABTAY” cadhuuna sidii saxiibkii muuse gafuurka taagay oo kama soo bixin hotelkii u ka daganaa magaalada haragaysa mudo usbuuc ah.
Odayaasha beesha u ka soo jeedo oo u horboodayo Suldaan Samatar iyo Madaxweyne ku xigeenka somaliland Saylici ayaa isku duubay oo yidhi boqonteen goday ninka afka xidha dhaha oo yaanu inagu hadlin , ilayn way ogyihiin oo Samatar oo wax qawaday aamuse maaye oo afkuu gacanta galine.
Ergada ayaa dhinac walba isku jiidhay hotelkii prof samatar ka daganaa magaalada hargaysa iyagoo ka ergaynaaya inaanu hadlin ee cadhadiisa iyo wax u la kulmayba liqo.
Prof samatar goor aan habeen ahayn maalina ahayn ayaa u ka soo booday magaaladii hargaysa , waxaan nasashadiisi ugu horaysay u ku nastay magaalada London ee cariga ingriisi isagoo halkaasi kula kulmay dhalinyartii , odayaashii iyo haween waynihii beeshiisa Maxamed Case,,,, Markii u hoolka soo galay amarkii ugu horeeyey ee u bixiyey waxaa u ahaa in aan haba yaraatee wax cod ah ama sawira la qaadi karin , waxaa intaasi sii dheer in uu yidhi telephonada ha la damiyo.
Hadal dheer oo furfurasho u badan waxa u sheegay in wax u meesha ku soo arkay aanay ahayn wax u filaayey , qaadan waana ay ku noqotay sida meesha beeli u xuurtaysatay , isagoo hadlka sii watana waxaa laga hayaa,,,, waxaan maanta laga biloobo ka shaqaynayaa midnimada shacabka galbeedka , waxaan socdaalkaygan hada ugu tagayaa ugaaska guud ee Samaroon .
Hadalkaasi prof samatar waxay dad badani ka dhan dhansadeen oo uga baxay in uu rabo in mustaqbalka ama doorashada tani xigta u yagleelo urur siyaasadeed u leeyahay isagu oo u madaxweyne ka noqodo , waayo garoon uga banaan somali wayn oo hadhay oo u ka ciyaara ma hadhin .
hadaba shacabka shabakada subulaha news, waxaan rabnaa inay nala wadaagaan argtidooda ku aadan arinta cusub ee ku soo cusboonaatay prof samatar isagoo hada London u dhaafay dhankaasi iyo baladkiisi maraykan.